Previous Article Ndị Onowu Anambra Ekesàárála Ndị Ụwa Na-Atụ n'Ọnụ Ihe Onyinye Ekeresimeesi
Next Article Ndị Uwe Ojii Anambra Ejidela Ndị Ohi Ọzọ Na Ndị Òtù Nzuzo
Dịka akụkọ siri kọọ, ọ bụ obere nwaada Chinenye Igwedimma, dị ahọ iri na asaa chọpụtàrà na ọkụ ahụ na-agba oge ọ bàtàrà ka o jee ụfọdụ ozi n'ụlọ ahụ, wee hụ na elu ụlọ ahụ na-akwàsị anwụrụ nke ukwuu ma bụrụkwa nke ọkụ na-ere pịataa; o wee mee ngwngwa kpọtegodi ma kpọpụchaa ụmụaka atọ nọ n'ime ụlọ ahụ arahụ ụra oge ahụ, tupu o tibezie mkpu ịgba àmà banyere ya bụ ọkụ ọgbụgba.
Nwaada Igwedimma gbakwara mbọ ka ike ya hà iji zọpụtasịa ụfọdụ ihe, dịka ọ na-akpọkù enyemaka ndị agbataobi na ndị ọrụ nsọnyụ ọkụ, bụkwa ndị bịara wee nye aka wee menyụọ ya bụ ọkụ, n'agbanyeghị na ọkụ agbarikọchaala ụlọ ahụ na ihe niile bara urù dị na ya tupu ha bịaruo.
Ajọ ọkụ ọgbụgba ahụ mètụtara ndị niile bi na ya bụ ụlọ, bụ nke nwere ime ụlọ anọ, tinyere otu onye ọrụ ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service, bụ nwaada Blessing Uchendụ, onye ọ gbarikọrọ ngwongwo ya niile pịatàà, ya na asambodo na nzèré niile o nwètàgòrò n'agụmakwụkwọ ya, malite n'ogo prịama wee ruo n'ogo mahadum ya.
N'okwu ya bànyere nke ahụ, osote onyeisi ọchịchị obodo Ụmụokpu, bụ Maazị Chika Nwụzọr katọrọ ajọ ọdachi ahụ, bụ nke ọ kọwara dịka nnukwu ihe mwute, ọbụnadị dịka o kèlèrè Chukwu na ọ dịghị ndụ ọbụla a tụfuru n'ihi nke ahụ, n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na o mebìrì ma bibiekwa ọtụtụ ihe bara oke úrù.
Na ntụnye nke ya, onye ji ọkwa 'Principal Fire Superintendent' n'ụlọ ọrụ nsọnyụ ọkụ na steeti Anambra, bụ Maazị Emmanuel Nzeh kwùrù na o siri ike mmadụ ịsị na ọ bụ ihe a maọbụ ihe a kpàtàrà ya bụ ọkụ ọgbụgba, n'ihi na o nweghị okenye nọ n'ụlọ mgbe ọ màlìtèrè, n'agbanyeghị na akụkọ kọrọ na ọ bụ ka ọ gàchàrà nwa nkenke oge e jirì wèta ọkụ ka ya bụ ihe jiri malite.
Ya bụ ndị ajọ ọdachi ahụ dabìdòrò jìkwàzịrị ohere ahụ wee kpọkuo ma rịọ enyemaka gọọmenti, ndị òtu ọrụ obi ebere na ndị ọzọ bụ ndị aka jiṅakụṅka ha biko gbatara ha ọsọ enyemaka na iti aka n'obi, n'ihi na nke ahụ mètụtara ha n'ụzọ dị iche-iche na n'ebe ọ dị njọ.